မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 09/01/2013 - 10/01/2013
Posted by mabaydar at 11:15 AM6comments :
ခရီးစဉ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ အစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် Finale တွေလို ၀က်ဝက်ကွဲသောင်းကျန်းတော့တာပါပဲ… အဲဒိနေ့က ၁၅ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃၊ သောင်္ကြာနေ့ဆိုတော့ ဆစ်ဒနီမြို့ခံသူငယ်ချင်း မောင်မောင် လဲ မိုးလင်းပေါက်ကဲလို့ရတဲ့ အခြေအနေ၊ ဟော… ၀ူလုံကုန်းကနေ အလုပ်ကို ၁ရက်တိတိခွင့်ယူပြီး တစ်နေကုန် တူတူလျှောက်သွားခဲ့တဲ့အပြင် ဆစ်ဒနီ Fish Market ကို သေလောက်အောင် ရှာဖွေလမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း သန္တာကိုတော့ လေးစားပါတယ် (ကျော်ဟိန်းအသံ ကျော်ဟိန်းဟန်ဖြင့် ပြောသည်) လို့ပဲ ပြောချင်ပါတော့တယ်…
မနက်ပိုင်းမှာ ညီအစ်မ ၂ယောက် မနက် ၈နာရီလောက်မှာ ဟိုတယ်ကထွက်လာပြီး သန္တာနဲ့ မြို့ထဲမှာတွေ့ပါတယ်… အဲဒိရက်မှာ မဗေဒါအစ်မက လမ်းတွေကို ကောင်းကောင်းသိနေပြီဖြစ်လို့ ဟိုတယ်ကနေ မြို့ထဲကို လမ်းလျှောက်ပြီး သွားတတ်နေပါပြီ… ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲလျှောက်ရပါတယ်… သန္တာနဲ့တွေ့တော့ မနက်စာအရင်စားမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး… ဆစ်ဒနီရောက်မှ ဓာတ်ကျနေတဲ့ Subway (သူက ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် အရသာက မပြောင်းတော့ စားရတာကောင်းတယ်) ကိုပဲ ၀င်စားဖြစ်ပါတယ်… အဲဒိနေ့မှာတော့ မဗေဒါဆီမှာ Cash လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး… သန္တာဆီက လိုရမယ်ရ Cash AUD 50 လောက်ချေးထားပေမဲ့ ကဒ်နဲ့ပေးလို့ရတဲ့နေရာမှန်သမျှ ကဒ်နဲ့ပဲပေးဖြစ်ပါတယ်… ကောင်းတဲ့အချက်က ဆစ်ဒနီမှာ နေရာတိုင်း Vending Machine က အစ ကဒ်နဲ့ပေးပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်… ဒိအတွက် သူမဆီက ချေးထားတဲ့ Cash AUD 50 ကို လုံးဝသုံးစရာမလိုပဲ ဆစ်ဒနီရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့မှာ ခရက်ဒစ်ကဒ်ချည်းပဲ ပျော်ပျော်ကြီးသုံးပြီး အသက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်…
Sydney Wildlife Park အတွေ့အကြုံ
ကျွန်မတို့က ညကတည်းက အွန်လိုင်းကနေ Combo ticket ဖြစ်တဲ့ ( Wildlife park + Sydney Aquarium = AUD 54 ) ကို ၀ယ်ထားတော့ တစ်ခုချင်းစီ အ၀င်ဝမှာဝယ်တာထက်သက်သာပါတယ်… မြို့လယ်ခေါင်မှာရှိလို့ Wildlife park ကို ဘယ်လိုမြို့လယ်မှာ ခံစားလို့ရမလဲလို့ အစကတွေးထားပေမဲ့… သူတို့က တိရိစ္ဆာန်တွေအတွက်ဆို ကိုယ့်ထက်တောင်ပိုတွေးပေးပါသေးတယ် (ရန်ကုန်တိရိစ္တာန်ရုံက ကျားမလေးကို ကျန်းမာရေးအရ Fasting လုပ်တယ်ဆိုပြီး သောင်္ကြာတစ်ရက် ဘာမှမကျွေးဘူးဆိုတာမျိုးရှိမယ်မထင်ပါဘူး)… လူတွေက အဲယားကွန်းပတ်လမ်းထဲကနေ မှန်ကာပြီးကြည့်လို့ရသလို သားဗိုက်ကောင်ထားတဲ့နေရာမှာဆို အဲဒိ သားဗိုက်ကောင်တွေထားတဲ့ သဘာဝပုံဖန်တီးထား Kangaroo Walk-about ဆိုတဲ့ နေရာလေးထဲကို ၀င်ကြည့်လို့ရပါတယ်… ကိုယ်ငြိမ်ငြိမ်နေပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း အနားကပ်ရင် သားဗိုက်ကောင်တွေနားဓာတ်ပုံကပ်ရိုက်လို့တောင်ရပါတယ်… အဲဒိမှာ အချိန်နဲ့အလိုက် Talk Show တွေရှိပါတယ်…
ကျွန်မတို့ရောက်တဲ့အချိန် သားဗိုက်ကောင်အကြောင်းပြောဖို့ရှိတာကြောင့် Kangaroo Walk-about ကို တန်းသွားဖြစ်ပါတယ်… ကိုယ်ဝင်ဝင်ချင်း အထဲမှာ ၀န်ထမ်း ပသိုင်းမွှေးလေးနဲ့ အဖြူကောင် ခန့်ချောလေးတစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ်… သားဗိုက်ကောင်လေးတွေကလဲ အရမ်းအနီးကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ့်နားမှာရှိပါတယ်… အဲဒိ ကောင်းနေတဲ့ အခြေအနေလေးကို ၀င်ရောက်ဖျက်စီးသူတွေကတော့ မဗေဒါရဲ့ ခရီးသွားပိုစ့်တစ်လျှောက် လူဆိုးအနေနဲ့ အမြဲထိပ်ဆုံးက နေရာယူထားတဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်မိသားစုပါပဲ…. မဗေဒါကတောင် သားဗိုက်ကောင်နဲ့ နဲနဲဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရသေးတယ်… အစ်မနဲ့ သူငယ်ချင်းဆို လုံးဝမရလိုက်ပါဘူး… မဗေဒါကတော့ သားဗိုက်ကောင်ကို ထိဖို့မပြောနဲ့ အနားတောင် သိပ်မကပ်ရဲပါဘူး… သူတို့ခြေထောက်ကြီးတွေနဲ့ ရင်ဝကိုကန်ရင်သေနိုင်တယ်လို့တောင်ကြားဖူးလို့ပါ… (ဟုတ်မဟုတ်မသိ တိရိစ္ဆာန်ဆိုတာ အစိုးရတာမဟုတ်)… သားဗိုက်ကောင်တွေက အဲဒိ လူ့ငနွားတရုတ်ကလေးရောက်လာပြီး သူတို့ကို စပြီး Abused လုပ်တော့ လန့်ပြီး အဝေးကြီးကိုပြေးသွားသလို ၀န်ထမ်းခန့်ချောလေးကလဲ မကြိုက်တဲ့ မျက်နှာပေးမျိုးစပြရင်း ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပါ နောက်ဆုတ်ခိုင်းပါတော့တယ်… သူ့ကြည့်ရတာ သားဗိုက်ကောင်တွေကို အတော်လေးချစ်ပုံရပါတယ်…
သားဗိုက်ကောင်က ကိုယ့်နားတဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေပြီ... အဲဒိအချိန်မှာ
အလိုက်မသိတဲ့ ဒီပြည်ကြီးတရုတ်ကလေး ၀င်လာပြီး အကောင်ကိုကိုင်လိုက် အော်လိုက်နဲ့ အကောင်ကလန့်ပြေးရော...
ခန့်ချောလေးလဲ သူ့အကောင်တွေကို သူ့ဘက်ခေါ်ပြီး သူ့ Talk Show ကိုစတော့တာပေါ့....
နောက်တော့ အကောင်တွေကို အစာကျွေးရင်း သားဗိုက်ကောင်တွေအကြောင်းရှင်းပြပါတယ်… အဲဒိထဲမှာ ကျွန်မမှတ်မိသလောက်ကတော့ ခုကျွန်မတို့တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ သားဗိုက်ကောင် အစ်မလေးတွေချည်းပါပဲတဲ့… သူတို့ကို အိမ်ထောင်ချပေးချိန်ရောက်ရင် ကံထူးရှင် အထီးတစ်ကောင်ကို ဟောဒီအမတွေထဲ လွှတ်ပေးပါတယ်တဲ့… အထီးတွေထဲ အမကိုလွှတ်ပေးရင် အဲဒိအမ မစားသာတဲ့အပြင် အထီးချင်းချင်းလဲ ဘောက်ဆင်ပလေးကြပြီး မလိုအပ်တာတွေဖြစ်လို့ပါတဲ့… အထီး ၁ကောင်ထက်ပိုထည့်ပေးတာနဲ့ အမတွေကြား boxing play ကြပြန်သတဲ့… ဒီတော့ ငမိုက်သားတွေကို ကံထူးရှင်စနစ်နဲ့ ၁ကြိမ်မှာ တစ်ကောင်ပဲ အမတွေအများကြီးနဲ့ စည်းစိမ်ခံရသတဲ့…
နောက်တစ်ချက်မှတ်မိတာကတော့ သားဗိုက်ကောင်မတွေရဲ့ ရှေ့ကအိတ်ထဲမှာ သားဗိုက်ကောင်ငယ် ၂ကောင်ဆန့်တယ်တဲ့… သူတို့ရဲ့ခြေထောက်အကြီးကြီးတွေပေါ်မှာလဲ ကလေးကိုတင်ပြီးခုန်လို့ရသတဲ့… တစ်ချိန်တည်းမှာ အများဆုံး ၄ကောင်လားမသိဘူး ချီပြီးပြေးနိုင်တယ်တဲ့ (သိပ်တော မမှတ်မိ… ကြားမိသလိုပဲ)… ဒါပေမဲ့ သားဗိုက်ကောင်မတွေက ပုံမှန် တစ်ခါမွေးရင် တစ်ကောင်ပဲမွေးတာပါ… အဲဒိအတွက်ကြောင့် ကလေးတွေက အရွယ်တော့ မတူဘူးပေါ့… ပြီးတော့ သားဗိုက်ကောင်အမတွေက ကလေးငယ်ကို ဗိုက်ကအိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာလဲ ချစ်တင်းနှောလို့ရပါသတဲ့… အဲဒိအတွက်ကြောင့် သြစတေးလျမှာ သားဗိုက်ကောင်တွေအများကြီးရှိပါသတဲ့…
သားဗိုက်ကောင်တွေရဲ့ ပြေးနှုန်းကိုလဲ ပြောပြပါတယ်… မမှတ်မိတော့လို့ ခု Wiki ကနေပဲ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တော့မယ်နော်… သားဗိုက်ကောင်တွေရဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ခုန်နှုန်းက ၁နာရီမှာ ၂၀ကနေ၂၅ ကီလိုမီတာ (၁၃-၁၆ mph) (၁မိုင်ကို ၁.၆ကီလိုမီတာရှိတယ်ဆိုတော့ ၁နာရီ ၁၅.၆၂ မိုင် အေးအေးဆေးဆေးပြေးနိုင်တာပေါ့) ဖြစ်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ သွားရမဲ့နေရာတိုတယ်ဆိုရင်တော့ ၁နာရီ ၇၀ ကီလိုမီတာ (၄၄ mph) (၁နာရီ ၄၃.၇၅ မိုင်) အထိ မြန်မြန်ခုန်နိုင်ပါတယ်… ( မြန်မာပြည်က ဘိုးတော်ဘုရားလေးဘက်ထောက်ခါစက ပေါ်တဲ့ ဘတ်စ်ကားအစိမ်းကြီးတွေ တစ်နာရီ မိုင် ၃၀ထက် မပိုရကားတွေထက် မြန်မြန်ပြေးနိုင်တဲ့သဘောပေါ့…) … သားဗိုက်ကောင်တစ်ကောင်ဟာ ၁နာရီ ၄၀ကီလိုမီတာ (25 mph) အရှိန်နှုန်းအတိုင်း ၂ကီလိုမီတာ (၁.၂မိုင်) ကို မနားတမ်းခုန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်… ကဲ… သားဗိုက်ကောင်အကြောင်းတော့ ဂလောက်ပဲနော်… ကိုယ်လဲ သားဗိုက်ကောင်တွေကိုချစ်တဲ့ Zoo Keeper ခန့်ချောလေးကိုကြည့်ရတာရော စိတ်ရှုပ်စရာ ပြည်ကြီးတွေကို ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ဝေးဝေးရှောင်ရတာနဲ့ သူရှင်းတာကို အာရုံက လာတစ်ချက် မလာတစ်ချက်ပေါ့.. ခိခိ…..
ဒါနဲ့ အဲဒိ သားဗိုက်ကောင်ဝန်းထဲမှာပဲ ယုန်အကြီးစားမျိုး Agile Wallabies တွေနဲ့ တခြားငှက်မျိုးတွေလဲရှိတယ်… ဒီလိုနဲ့ အဲယားကွန်းပတ်လမ်းထဲပြန်ထွက်ပြီး ဆက်လျှောက်ကြည့်ကြတာပေါ့… အမှောင်ခန်းထဲမှာ မီးပြာလေးနဲ့ပဲ နေတဲ့ အကောင်လေးတွေလဲ တွေ့ခဲ့တယ်… မုန်းစရာ ဖွတ်လိုအကောင်တွေ (ဘာလို့မှန်းမသိဘူး ဖွတ်ကြီးတွေကို ရွံမုန်းကြီး)လဲတွေ့တယ်…
ဘာငှက်လေးလဲမသိဘူး သေးသေးလေး... သားဗိုက်ကောင်တွေထားတဲ့ ၀န်းထဲမှာပဲ...
ဒီလောက်ကြည်ကြည်ရဖို့ ၁၀ပုံလောက်ရိုက်လိုက်ရတယ်... သူက အမှောင်ခန်းထဲက ညမင်းသား...
မိချောင်းဘက်ကိုလျှောက်တဲ့ အကွေ့တစ်နေရာမှာ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်လိုဟာကြီးက အစက ရေကန်ပုံပဲ လူဖြတ်လျှောက်မှ ရေကန်ထဲက မိကျောင်းကြီးထွက်လာပြီး Speaker တွေကလဲ မိကျောင်းအော်သံကြီး ရုတ်တရက်ထွက်လာတာ လူကို လန့်သွားတာပဲ… အဲဒိဆိုင်းဘုတ်ကြီးဘေးက အပေါက်ကိုဝင်လိုက်ရင်ဖြင့်
ဒီပိုစတာကြီးပေါ့... လူလာမှ ထကိုက်တာ...
KAKADU GORGE ကိုရောက်ပါပြီ…
KAKADU GORGE မှာ မင်းမူနေထိုင်သူကတော့ ရေငံတနင်းအပိုင်စိုးတဲ့ (ဦးရှင်ကြီး မဟုတ်ဘူး)… ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေငံမိကျောင်းတွေထဲမှာ တစ်ကောင်အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ အရှည် ၅ပေ ရှိပြီး ၁၂၀၀ ကီလိုလေးတဲ့ REX လို့ အမည်ရတဲ့ ရေငံမိကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်… ရေငံမိချောင်းတွေဟာ ရေငံမှာလဲ နေနိုင်သလို ရေချိုမှာလဲ သူတို့ဟာ ပျော်ပျော်ပါးပါးနေနိုင်ပါတယ်… မိကျောင်းတွေဟာ စိတ်ရှည်ပြီး ထူးချွန်တဲ့ အမဲလိုက်သမားတွေပါ… သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးနဲ့ နှာခေါင်းလေးကိုသာရေပေါ်ဖော်ထားပြီး ကံဆိုးသူ သတ္တ၀ါကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်တတ်ကြပါတယ်… သူတို့တွေဟာ ၂နာရီကြာ ရေအောက်မှာ အသက်အောင့်နိုင်ကြပါတယ်တဲ့… (အရင်က မိချောင်းကို ငါးတွေလိုပဲ ရေအောက်မှာ အသက်ရှုနိုင်တယ်ထင်ထားတာ… ခုမှ သတိထားမိတော့ ဟုတ်သား မိချောင်းမှာ ဗဟတ်မှ မရှိတာ…)
အပေါ်က အင်ဖိုတွေက Wildlife Sydney website ကနေ မှီငြမ်းယူထားတာပါ…
REX ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါအုံး...
ဟောဒီလိုကူးလားပြီး... ဟောဒီလက်ကြီးနဲ့ဖမ်း... ဟောဒီအမှီးကြီးနဲ့ရိုက်ခံရလို့ကတော့......
ကဲကဲ… အဓိက ဒီလာတာ သားဗိုက်ကောင်ရယ် Koala ရယ်ကိုကြည့်ချင်လို့… ဒီတော့ Koala ဆီကိုသွားမှဖြစ်မယ်… လှပတဲ့ အဆောက်အဦးအမိုးပေါ်မှာ Koala တွေနဲ့အတူ မနက်စာစားလို့ရပါတယ်လို့ ကြော်ငြာထားတယ်… သူတို့ညာတာမဟုတ်ဘူးနော်… ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မျှော်လင့်ချက်လွန်တာ… Koala လဲသူ့ဟာသူစား ကိုယ်လဲ အဲဒိ Rooftop မှာရှိတဲ့ Coffee ဆိုင်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စား… တကယ့်အဖြစ်ကတော့ ဒါမျိုးဖြစ်မှာ… ကိုယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်က မနက်စာစားချိန်မဟုတ်တော့လဲ အဲဒါကို သိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး… ဒါနဲ့ အနီးကပ်ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လို့ရတယ်လေ… 6x8 ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးပါတဲ့ CD တစ်ချပ်ကို AUD 35 ကျတယ်… CD မယူရင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းနဲ့ AUD 30… ဒီတော့ စီဒီယူတာပိုတန်တယ်… ပြီးတော့ ကိုယ့်မှာပါတဲ့ ကင်မရာနဲ့လဲ ကြိုက်သလောက်ရိုက်ခွင့်ပေးတယ်…. (အရမ်းတော့ မကြာစေနဲ့ပေါ့နော်)…
ခင်ဝင့်ဝါထက် ကိုက်ပေးကြမ်းတဲ့ ကွာလာ...
ကွာလာတွေကို ချီပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သြစတေးလျအစိုးရက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ကစပြီး တားမြစ်လိုက်တဲ့အတွက် ခု New South Wales မှာရှိသမျှ ဘယ် wildlife park မှာမှ ကွာလာကို ချီခွင့်မပေးတော့ပါဘူး… သို့သော် ဒီ Darling Harbour Wildlife Sydney Zoo မှာတော့ ကွာလာကို အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေပဲ ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးရင်း အနီးကပ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပေးပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ယခုလို လုပ်ခွင့်ပေးထားသော်ညား လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ကြိုတင်ကြေငြာခြင်းမရှိပဲ ကွာလာရဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပိတ်ပင်ချင်ပိတ်ပင်ပါမယ်တဲ့… (မြန်မာပြည်က VIP လူကြီးတွေထက် ဆရာကျတယ်နော်… :P )… အဲလိုစည်းကမ်းထားမှပေါ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကွာလာတွေဟာ တစ်နေ့မှာ ၁၈နာရီကနေ ၂၂နာရီ အိပ်ပါတယ်… သူတို့နိုးတဲ့အချိန်မှာ စားတယ်၊ ချစ်တင်းနှောတယ်.. ပြီးပြန်အိပ်တယ်… လူတွေက တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ချီနေရင် သူတို့ဘယ်အိပ်ရမလဲ… ကိုယ်အိပ်ရေးပျက်ရင်တောင် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာ… ကွာလာလဲ ဒီအတိုင်းပဲပေါ့… ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ့်အလှည့်မရောက်ခင်တော့ ကွာလာက ကင်မရာဘက် မျက်နှာပေးပြီး Miss Universe အထှာမျိုးနဲ့ ဂိုက်ပေးကြမ်းအိပ်နေပြီး…. ကိုယ့်အလှည့်လဲကျရော အပင်တွေဘက်ကို မျက်နှာထိုးအိပ်သွားပါရော… (မြန်မာတွေမို့ နှိမ်တာဖြစ်မယ်… ကတောက်)… မိုးကလဲ ဖွဲဖွဲကျလာတယ် သူက Outdoor Rooftop ဆိုတော့ စိတ်ထဲတော့ စိုးရိမ်သွားမိတယ်… ဓာတ်ပုံဆရာကလဲ ထမင်းစားသွားချင်နေတဲ့ပုံပေါက်တယ်… ဒီလိုနဲ့ပဲ ကွာလာရဲ့ တင်ပါးကို လက်လေး ၂ချောင်းနဲ့ပဲ ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ ၀န်ထမ်းကပြောတော့ AUD 35 တန် ကွာလာ ဖင်ကိုပဲ လက်လေး ၂ချောင်းနဲ့ အသာထိရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဘ၀… ဘယ်ရမလဲ ကွာလာနဲ့ မရိုက်ရတော့ ကွာလာထိန်း ပသိုင်းမွှေးလေးနဲ့ အနီးကပ် ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တယ်… မှတ်ပလား…. ငွင်း ..ငွင်း….
အဲ့နားလေးကို လက်လေး ၂ချောင်းနဲ့ ဖြည်းဖြည်းလေးပွတ်ပေးပါတဲ့...
ကွာလာမျက်နှာနဲ့ မရိုက်ရမှတော့ ကွာလာထိန်း မောင်ပသိုင်း နဲ့ ရိုက်မယ်ကွာ...
ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့ ကွာလာထိမ်းကလဲ ရိုက်ထားတာ တစ်ပုံမှမကောင်း… ၁ယောက်မအိပ်ရင် နောက်တစ်ယောက်ကအိပ်… တစ်ယောက်က ပြူးပြဲနေ… ဒါနဲ့ ဘယ်ပုံတောင် Print out ထုတ်ရမယ်မသိဘူး… သူတို့ကတော့ ပြန်ရိုက်မလားပြောပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကွာလာထိမ်းကလဲ အိမ်သာတက်ချင်နေလားမသိ မအီမသာနဲ့မို့ တော်ပြီဆိုပြီး ရှိတာပဲယူလာလိုက်တယ်… သူတို့ဆိုင်က ကွာလာ အရုပ်တွေကိုင်ပြီးပဲ ရိုက်ခဲ့တယ်…
အရမ်း အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်း.... အကောင်အစစ်တော့ ကိုင်ရဲပေါင်...
Sydney Wildlife Zoo ကနေ ထွက်ပြီး ဟိုဘက်အဆောက်အုံးကူးပြီး ၀င်လိုက်တာနဲ့ Sydney Aquarium ကိုရောက်ပါရော… ငါးပြတိုက်တွေကတော့ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ တူတူတွေချည်းပါပဲ… under water walk ကျတော့ အပေါ်က ရေကန်က အမိုးပွင့်ဆိုတော့ အပြင်က နေရောင်ထိုးတော့ အောက်ကလျှောက်တဲ့လမ်းက လင်းနေတယ်… အဲဒိထဲမှာတော့ ကျွန်မတို့ ၃ယောက်ကို ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး… ငါးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ရင်း တခွိခွိကို ရီနေကြတာ… ငါးနောက်ကို ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ ကလေးတွေတောင် ကျွန်မတို့လောက် ဆော့ပါ့မလားမသိဘူး… ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာနဲ့တင် အချိန်ကုန်ပြီး လူလည်းနည်းနည်းပင်ပန်းလာတယ်… ပုဇွန်ထုတ်တွေ ဂဏန်းတွေတွေ့တော့ ဗိုက်ကလဲဆာပြီး ပင်လယ်စာစားချင်လာတယ်… Sydney ရဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေသွားနေကျ Fish Market ကို ဟိုရက်ကတည်းက သွားချင်ပေမဲ့ လမ်းမကြုံတာရော၊ နယ်ခံသူငယ်ချင်း မောင်မောင်ကလဲ ဈေးကြီးပြီး ဘာမှလဲ သိပ်မကောင်းပါဘူးဆိုလို့ မသွားဖြစ်ခဲ့ဘူး… ဒီနေ့တော့ စားရမှဖြစ်မယ်ပေါ့… Tourist Attraction နေရာဆိုတော့ ရိတ်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်… ဒါပေမဲ့ စကာင်္ပူက Clark Quay ဆိုလဲ ရိတ်ပေမဲ့ စားလို့ကောင်းသေးတယ်လေ… ကိုယ့်မျက်လုံးထဲ စားချင်တဲ့ ပင်လယ်စာဟင်းတွေပဲ ပြေးမြင်ပြီး အလည်လာမှတော့ ဒီလိုနေရာမျိုးတွေ ရောက်ဖူးတယ်ရှိအောင် သွားမယ်ကွာဆိုပြီး ခပ်မိုက်မိုက်ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…
အပေါ်က အကောင်ကြီးတွေရှေ့က လွှသွားကြီးလိုပဲ.... ဒါပေမဲ့ ပါးစပ်ပေါက်က အောက်မှာ... အဲဒိ လွှသွားက ဘာအတွက်သုံးလဲမသိ....
ရေဘ၀ဲ သွေးက အပြာရောင်ဆိုတာ သိလား? အဲဒိ စုတ်ခွက်ကြီးတွေ အရမ်း အသည်းယားတယ်...
အဲဒါ ဝေလငါးလေးလား? လူတွေကို ပြုံးပြနေသလိုပဲ...
စောစောက ကျွန်မတို့ အောက်က ဖြတ်လျှောက်ခဲ့တဲ့ ရေကန် အပေါ်ဘက်...
သူတို့လိုနိုင်ငံမှာတောင် အရက်သောက်တာ နေရာတိုင်းခွင့်မပြုဘူး... ဒီမိုကရေစီစစ်ရင် စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ပိုနေရတယ်...
ဒီလိုနဲ့ သုံးယောက်သား လူတွေကိုမေးတော့ မြေအောက်ကားစီးရမယ်တဲ့… မြေအောက်ကားဆီရောက်ဖို့က တော်တော်လျှောက်ရသေး… ရောက်တော့ မြေပုံကြည့်လိုက်တော့ Fish Market က နီးနေပြီလို့ထင်တာနဲ့ မစီးတော့ပဲနဲ့ လမ်းဆက်လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်… ဒါပေမဲ့ မြေပုံထဲကအတိုင်း အပြင်ကလမ်းကမဟုတ်ဘူး… အဲဒိမှာ ကျွန်မတို့ လမ်းပျောက်ပြီးလူတွေလဲ အတော်ပြိုင်းလာတယ်… နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မကပဲ မှားချင်လဲမှား လျှောက်မယ်ဟာဆိုပြီး ရှေ့ကိုဆက်သွားတော့မှ Sydney Fish Market သို့ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့တယ်… ဒါနဲ့ တွေ့ပြီမှတ်နေတာ… ဟုတ်ဘူး သူမျှားပြတဲ့ လမ်းတဆုံးထပ်လျှောက် အဆုံးမှာလဲ ဘာမှမတွေ့ဘူး… နောက်ထပ်ဆိုင်းဘုတ်လဲမတွေ့ဘူး… ကုန်းကျော်တံတားနဲ့ ကားလမ်မကျယ်ကြီးရဲ့ တစ်ဖက်မှာ ဆိပ်ကမ်းလိုဟာမျိုးပဲရှိတော့တယ်… ဆိုင်းဘုတ်လဲထပ်မတွေ့ဘူး… တကယ် လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ အသေအချာထားပေးတာ စကာင်္ပူက အကောင်းဆုံးပဲ… သြစီက ဆိုင်းဘုတ်တွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝေးလွန်းတော့ ကြားမှာ လမ်းပျောက်နေရော… ကံကောင်းချင်တော့ ဂျပန်ခရီးသွား အဖွဲ့တစ်ခုက ကိုယ့်ရှေ့ကနေ ကားလမ်းဖြတ်ကူးသွားတော့ သူတို့နောက်ပဲ လိုက်ဟေ့ဆိုပြီး လိုက်ခဲ့ကြတယ်.. မဗေဒါထင်ရင် လွဲခဲပါတယ်… ဟတ်… ဟတ်… သူတို့က ရှေ့က ဆိပ်ကမ်းလို ၀န်းကြီးထဲ ၀င်သွားတာကို လိုက်တော့မှ Sydney Fish Market ဆိုပြီး အဆောက်အအုံးအကြီးကြီးတွေ့တော့တယ်… (စိတ်ထဲမှာ အခက်အခဲတွေကြားက နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲအောင်နိုင်သွားတဲ့ ပြကွက်ထဲက တီးလုံးမျိုး အဲ့ဒိဆိုင်းဘုတ်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် နောက်ခံတီးပေးချင်လာတယ်…)
ညနေ ၃နာရီလောက်ရောက်သွားတာတောင် ဆိုင်တွေမသိမ်းခင် ကပ်သီးလေး မှီတာ… ထိုင်ဖို့နေရာတောင် မနည်းရှာရတယ်… ပုံတွေကြည့်တော့ စားကောင်းမဲ့ပုံတွေပေါ့…. ဒါနဲ့ သန္တာနဲ့ ကျွန်မ အစ်မပဲ သွားမှာကြတယ်… ထမင်းနဲ့ ပင်လယ်စာတွေမှာလာတယ်…. ဒါပေမဲ့ ဟင်းတွေက ကိုယ်အားခဲထားသလိုအရသာမျိုး လားလားမှမဟုတ်…. ကျောက်ပုဇွန်ကြီးက ချီးစ်တွေနဲ့အုတ်ထားတာတော့ သားရေယိုစရာ ဒါပေမဲ့ ထမင်းနဲ့စားဖို့ လုံးဝမလိုက်ဖက်… ကျန်တာတွေအကုန်ကလဲ ချီးစ်တွေက အဓိကပဲ… ထမင်းချက်ထားတာကျတော့ မာတောင်ပြီး အစေ့လိုက်… အဆိုးဆုံးကတော့ ဘာဟင်းအနှစ်မှမရှိတာပဲ…. ဒါနဲ့ Ketchup တို့ Chili တို့တောင်းမယ်ဆိုတော့လဲ မဗေဒါတို့လိုက်ရင် ၂ခါစာလောက်ပဲရှိတဲ့ ဗူးသေးသေးလေးကို AUD 0.50 နဲ့ဝယ်ရတယ်ဗျ… ဒါကြောင့် မောင်မောင်က အဲဒိနေရာသွားဖို့ အားမပေးတာ… ကိုယ်ကလဲ Clark Quay လိုလေးများလားလို့ပါ… သူက ဈေးလိုရုံကြီးထဲမှာ စားသောက်ဆိုင်လေး ၄၊ ၅ဆိုင်ရှိတာကို တိုးကြိတ်စားရတာ… ပင်လယ်စာတွေကတော့ လတ်ဆပ်နေတာပါပဲ… တကယ့်ကို Fish Market ဈေးမှ ဈေး စစ်စစ်.. တခြားကျော်မတွေးမိစေနဲ့…
ဒါက ဟိုဘက်ဆိုင်... သူက အစိမ်းပဲရောင်းတာ... ပင်လယ်စာတော့ လပ်မှလပ်
စားသောက်ပြီးအပြန်ကျတော့ သွားစရာနေရာလဲ သိပ်မရှိတော့သလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညအတွက် အားပြန်ဖြည့်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ ဟိုတယ်ပြန် ခဏနားပြီးမှ ညနေဘက် မောင်မောင်လဲ အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ပထမရက်က ရောက်ခဲ့တဲ့ Opera House နားက bar တွေမှာပဲ စကားအေးဆေးပြော လေညင်းခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်… ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ ၄နာရီခွဲလောက်ရှိပြီလေ… ၁နာရီလောက် ခဏလှဲလိုက်ပြီး ရေမိုးချိုးပြင်ဆင်ပြီး ပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်… သန္တာလို မိတ်ကပ်သိပ်မလိမ်းတဲ့သူကို မြှောက်ပေးပြီး Smoky Eyes ချယ်ပေးလိုက်တယ်… သူ့မျက်လုံးပိုညှို့အားပြင်းသွားအောင်လို့… သူကတော့ သူ့မျက်လုံးကို ထည့်တာများနေပြီဆိုပြီး ကြောက်နေတယ်…. ကျွန်မအမြင်မှာတော့လှပါတယ်… သူကတော့ မိတ်ကပ်သိပ်မလိမ်းတော့ နေရတာ မသက်မသာဖြစ်နေတာပေါ့…
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မတို့ ၃ယောက်မြို့ထဲဘက်ကို ထွက်လာကြတယ်… သန္တာက အင်္ကျီအပိုမယူလာတော့ ဒီည ဆစ်ဒနီမှာကျွန်မတို့နဲ့ အိပ်မယ်ဆိုရင် ၀တ်ဖို့ သက်တောင့်သက်သာရှိမဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်လောက်ဝယ်မယ်ဆိုပြီး မြို့ထဲက အင်္ကျီဆိုင်မှာဝင်ကြည့်… ကျွန်မတို့ မိန်းမတွေ ရှော့ပင်းလုပ်ပြီဆိုသိတဲ့အတိုင်းပဲ… ၃ယောက်သား တစ်ထည်ယူလိုက် Changing room ထဲ ၀င် ၀တ်ကြည့်လိုက်နဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ… မောင်မောင်နဲ့ ခြိမ်းထားတာတောင် ခေါင်းထဲမရောက်တော့ဘူး… ဖုန်းလဲမကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး… နောက်မှ နင်ဘယ်ရောက်ပြီလဲ… ငါတို့က ရောက်တာကြာလှပေါ့…. နင်မလာသေးလို့ ဒီမှာ အကျီင်္ဝင်ဝယ်နေတာ ခုတန်းလန်းကြီး ခဏစောင့်အုံးပေါ့.. ခိခိ… ခဏနေ သူနဲ့တွေ့တော့ အားတော့ ခပ်နာနာပါ… ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးသဘာဝပဲ မောင်မောင်ကလဲ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုတော့ သည်းခံနိုင်မှာပါ… နောက်ပြီး ကျွန်မအစ်မ၀ယ်ချင်တဲ့ Nougat ကို လိုက်ရှာကြတယ်… ကျွန်မတို့ကအဲဒိအချိန်က Nougat ကို နာမည်မေ့နေတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းလဲ ဘာလိုချင်မှန်းသေချာမသိတာနဲ့ပဲ မတွေ့ဘူး… Supermarket တွေမှာဝင်ရှာတာလဲ မတွေ့ဘူး… နောက်ဆုံးတော့ လက်လျှော့လိုက်တယ်…
Star Bar – Review
မောင်မောင်က ဘာစားချင်လဲမေးတော့ သူအဆင်ပြေတာပဲပြောလို့… ဒီတော့ Steak စားချင်လာဆိုတော့ စားချင်စိတ်ပေါ်သွားတယ်… ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်တော်တော်များများ ထိုင်းစာနဲ့ ကိုရီးယားစာနဲ့ ဂျပန်စာကို လှည့်ပတ်စားနေတော့ ဒီနေ့တော့ အနောက်တိုင်းစာစားသင့်နေပြီ… :D … ဒီလိုနဲ့ အဲဒိနားတစ်ဝိုက်က Star Bar ဆိုတာကို သူခေါ်သွားတယ်… Star Bar က ဆစ်ဒနီ တရုတ်တန်းမှာရှိတာ… လိပ်စာက 600 George St Sydney NSW 2000, Australia .. သူက ဘားဆိုပေမဲ့ Restaurant လဲရှိတယ်… အထဲကအပြင်အဆင်က အရမ်း Classy ကြီးဖြစ်မနေပေမဲ့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ သူငယ်ချင်းတွေ အေးဆေး စားသောက် စကားထိုင်ပြောလို့ရတယ်… ကျွန်မတို့ရောက်တဲ့အချိန်က လူသိပ်မများသေးဘူး.. ညဘက်ဆိုရင်တော့ ကလပ်လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်… သူငယ်ချင်းက Crispy Pork Belly ကို ညွှန်းတာနဲ့ ကျွန်မအဲဒါစားဖြစ်တယ်… ဈေးလဲသိပ်မကြီးဘူး တစ်ပွဲမှ AUD 15 to 18 ကြားပဲရှိတယ်… တစ်ပွဲဆိုရင်လဲ အများကြီးရပါတယ်… စားခဲ့သမျှ အနောက်တိုင်းစာတွေထဲမှာ ကျွန်မပါးစပ်ကို အတော်လေး အရသာတွေ့တာတော့ အဲဒိဆိုင်ပါပဲ… အဲဒိည ဒစ်နာကိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ကျွန်မပဲ ဒကာခံလိုက်တယ်… ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ဆိုတော့ ပိုက်ဆံထွက်တာက မသိသာဘူးလေ… ဟိ.. ဟိ… ဆစ်ဒနီရောက်ရင် အဲဒိဆိုင်မှာ ၀င်စားဖို့ Recommend ပေးတယ်နော်… အောက်က ဗွီဒီယိုမှာလဲ Food Review လေးကို တစ်ဦးချင်းက သေချာပြောပြထားတယ်… ကြည့်ပြီးရင် ခံစားချက်လေးတွေမျှဝေသွားပါအုံး…
အရမ်းကောင်းတယ်.... Recommended by My friend... and Now I Recommend you...
မြန်မာဆန်ဆန် Well Done ပဲစားတယ်... မကျက်တကျက်တွေမစားရဲဘူး...
အဲဒိဆိုင်မှာ မဲလဘုန်းကနေမလာနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်း သီရိကို ဖုန်းခေါ်ဖြစ်သေးတယ်… သူမအားတာနဲ့ နောက်မှပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီး မဆက်ဖြစ်ဘူး…. ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ တစ်ယောက် ငယ်ကျိုးငယ်နာ တစ်ယောက်သိဖြစ်သလို သိပ်လဲ စိတ်မဆိုးတတ်ကြတော့ အရည်မရ အဖတ်မရတွေပြောဖြစ်ကြပါတယ်… တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ပြောလိုက်ပြီးမှ ငါလွန်များသွားပြီလား စိတ်များဆိုးမလားလို့ စိတ်ထဲဖြစ်မိပေမဲ့ စိတ်မဆိုးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် အဲလိုတွေးမိတာကိုပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရှက်ရပါတယ်… သူတို့ပြောလဲ ကိုယ်က အသေးအဖွဲနဲ့ စိတ်မှမဆိုးပဲ… စိတ်ထဲမခံချင်ရင်လဲ မြုံမထားပဲ ပက်ကနဲပြန်ပြောလို့ရတဲ့သူငယ်ချင်းဆိုတာ ခုနောက်ပိုင်းမရှိသလောက်ပဲလေ…
Custom House Library and it’s Heavenly viewing floor
အဲဒိမှာ ညစာစားပြီးတော့ Circular Quay ဘက်ကို လမ်းလျှောက်ရင်း Circular Quay ဘူတာရုံရှေ့က အဆောက်အအုံးတစ်ခုထဲကို မောင်မောင်က ခေါ်သွားမယ်… ဒါပေမဲ့ နင်မျက်စိမှိတ်ပြီးလိုက်ခဲ့ရမယ်တဲ့… ဘာလို့လဲ… ဘာလဲဆိုတော့ သူကမပြောဘူး… မျက်စိမှိတ်ပြီးသာလိုက်ခဲ့ပါတဲ့… ခပ်လန့်လန့်ပဲ… ကိုယ့်ဘာများ ခြောက်ချမလို့လဲလို့.. (ခစ်… ခစ်)… နည်းနည်းလေး ခိုးကြည့်မိပေမဲ့ ဘာမှန်းတော့ ကျွန်မ မသိပါဘူး… အဓိကက ချော်လဲမှာကြောက်တာပါ… နောက်တော့သူက ကြည့်လို့ရပြီ… အောက်ကိုငုံကြည့်ဆိုတော့မှ ဆစ်ဒနီမြို့ထဲကို ကောင်းကင်ပေါ်က ကြည့်ရသလိုမျိုး Model ပုံစံငယ်သေးသေးလေးတွေ ကြမ်းပြင် ဖန်သားအောက်မှာမြင်ရတယ်… အဲလို သေးသေးလေးတွေတွေ့ရင် သိပ်ကစားချင်တာ… ကလေးမဟုတ် သူငယ်မဟုတ်… ဒါပေမဲ့ မှန်ကာထားတော့ ကစားလို့မရဘူး… ဒါပေမဲ့ အသည်းယားတယ်… အဲဒိမှာတော့ ဓာတ်ပုံကင်မရာထုတ်ရမှာပျင်းတာနဲ့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ဘူး… ဗွီဒီယိုထဲမှာပဲ ကြည့်လိုက်နော်… အဲဒိနေရာက ခုမှ အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တော့ Customs House Library တဲ့…
သန္တာကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အပင်ပန်းမခံနိုင်တာ ခုထိလဲ တူတူပဲ… သူတော်တော်လေးကို ပင်ပန်းနေပြီ ကျွန်မရဲ့ Smoky eye မိတ်ကပ်ကလဲ သူ့ကို ပိုပင်ပန်းစေတယ်ထင်ပါတယ်… ကျွန်မက ဖျက်လိုက်လို့ပြောပေမဲ့ သူက အနက်တွေကျန်ပြီး ပြန့်ကုန်မှာစိုးလို့ မဖျက်ပါဘူး… ဘူတာရုံအောက်က ရေခဲမုန့်ဆိုင်မှာ မောင်မောင်က ရေခဲမုန့်ဝယ်ကျွေးပါတယ်… ကျွန်မကတော့ အစားအသောက် Risk မယူရဲတာနဲ့ ကိုယ်သေချာပေါက်ကြိုက်မဲ့ စတော်ဘယ်ရီပဲမှာပါတယ်… Flavor အသစ်အသစ်တွေကို အမြဲစားတဲ့ မောင်မောင်က လိုင်ချီးနဲ့ Raspberry စားပါတယ်… သူ့ဆီက တစ်ဇွန်းတောင်းစားကြည့်တော့ လိုင်ချီးက တော်တော်ကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်… (နာတယ်ကွာ… လိုင်ချီးစားရမှာ)…
Sydney Harbor Bridge နှင့် ပျော်စရာတွေ သော့ခတ်ယူလာတယ်...
Opera House နားရောက်တော့ Bar ကနေ အအေးမသောက်ခင် အဲဒိနားက အုတ်ခုံတွေမှာပဲ ထိုင်ရင်း သီရိဆီကိုဖုန်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်… ဖုန်းပေါ်ကနေ စကားတွေပြောဖြစ်တာ ၁နာရီကျော်လောက်တောင် ကြာမယ်ထင်ပါတယ်… တော်ရုံတန်ရုံကျွန်မသိပ်မရင်းနှီးတဲ့လူနဲ့ ဖုန်းပြောရတာကိုကျွန်မ သိပ်မုန်းပါတယ်… ကိစ္စတော်တော်များများကို ဖုန်းပေါ်ကပြောရတာ ကျွန်မမကြိုက်ပါဘူး… မျက်နှာကြည့်ပြီးပြောရတာပဲကြိုက်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ အဲဒိညကတော့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖုန်းပြောဖြစ်ပါတယ်… သူ့ဘက်က ဘယ်လိုရှိနေမလဲ… ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လိုတွေးနေမလဲ၊ ကိုယ်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ ကိုယ့်ကို အထင်သေးသွားမလား ဆိုတာတွေ ခေါင်းထဲတောင်ရောက်မလာပါဘူး… ကျွန်မက ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြထားပေမဲ့ တဆင့်တဆင့်နဲ့သိလာကြတဲ့ ကျွန်မဘလော့လေးရဲ့ Die Hard ALMOST Silent Readers တွေဟာလဲ သူတို့ပါပဲ… (ခိ…ခိ.. ကွန်မန့် ဓားပြတိုက်နေတာ)… ကျွန်မတို့ မတွေ့ခဲ့တာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ ခုချိန်ထိ ၁၃ နှစ်လုံးလုံးကြာခဲ့ပေမဲ့ အသံတွေ ဟန်တွေ ငယ်ငယ်ကအကျင့်တွေ စကားပြောပုံတွေ အားလုံးက မပြောင်းမလဲပဲရှိနေကြပါသေးတယ်… သီရိနဲ့ဆိုရင် ဒီတစ်ခေါက်လဲ မတွေ့ခဲ့ရဘူးဆိုတော့ ၁၃နှစ်ကျော်မှာပေါ့နော်… နောက်နှစ်တွေ့ရပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်… ခင်မင်မှုဆိုတာ အမြဲတွေ့နေမှ မဟုတ်ဘူး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ထဲမှာ အမှတ်ရနေပြီး အကျိုးအမြတ်ကို မကြည့်ပဲ ပေါင်းသင်းကြတာကို ဆိုလိုတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ချင်ပါတယ်…
ငယ်ငယ်က ဓာတ်ပုံ တူတူ တစ်ခါမှ မရိုက်ဖူးလို့... ခုမှ တမုန်းရိုက်နေတာ...
ညတော်တော်လေးနက်တော့မှ ပြန်လာကြပြီး လမ်းတစ်လျှောက်လဲ မြန်မာသီချင်းတွေအော်ဆိုမိနေပါသေးတယ်… ဟတ် ဟတ်… တိုက်စီပေါ်လဲ သီချင်းတွေဆို… အဲဒိက တိုက်စီသမားတွေက တစ်ခုကောင်းတယ်… ပါလာတဲ့ Passenger ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် Judge လုပ်တဲ့ Attitude မရှိဘူး… သူ့ဟာသူ အေးဆေးပဲ… ကားနဲ့ဖြတ်သွားတုန်း ညဘက် မြင်းကြီးတွေစီးပြီး အင်္ဂလန်က အပေါက်စောင့် ၀တ်စုံ အနီရောင်လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ ကင်းလှည့်နေတာ တွေ့လိုက်သေးတယ်… တမျိုးကြီးပဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ မသိ… ဟိုတယ်ကို ည ၁၁နာရီ လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်… သန္တာကတော့ မျက်နှာက မိတ်ကပ်တွေဖြတ် တန်းပြီး ရေမိုးချိုးတော့တာပဲ… ကျွန်မနဲ့ မောင်မောင်ကတော့ ပါလာတဲ့ Laptop နဲ့ Youtube က မြန်မာသီချင်းတွေဖွင့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် Celebrity လိုလို Idol လိုလိုနဲ့ ကင်မရာကြီးရှေ့ထောင်ပြီး ပေါကြတာပါပဲ… လူမိုက်အားပေးကတော့ ကျွန်မအစ်မပေါ့… ကလေးတွေ မထိန်းတဲ့အပြင် သူကပါ လိုက်ကဲနေရော… ဟတ်… ဟတ်… ကျွန်မကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တော့ မသောက်ပဲနဲ့ High နေတာ… မောင်မောင်ကသောက်ထားတာက နည်းနည်း High တာက များများထင်တယ်… အဲဒိညမှာ အားလုံးရဲ့ အပေါပိုးတွေထကြွပြီး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပရောဂျက်လေးတစ်ခုရှိတယ်… အဲဒါကိုတော့ လျှို့ဝှက်ထားအုံးမယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ မသေချာလို့…
Harbor Bridge က အချစ်ဇာတ်လမ်း... :P
Opera House မှာကတည်းက ခုန်တဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်း နည်းနည်းလေးမျက်သွားတဲ့ ခါးက အခန်းထဲက မွေ့ယာအပျော့ပေါ်မှာ ပုံစံကျကျမထိုင်လို့ထင်တယ် ရုတ်တရက်ကြီး အရမ်းနာတော့တာပါပဲ… ထိုင်ရာကနေ ချက်ချင်းထပြီး ခါးကို ဖြောင့်လိုက်လို့မရဘူး…. ထရာကနေလဲ ချက်ချင်းထိုင်လို့မရဘူး… အဘွားကြီးတွေလို ခါးကို ကိုင်းပြီးလမ်းလျှောက်မှရတယ်… မဟုတ်ရင် အရမ်းနာတယ်… ဆေးလိမ်း ဆေးသောက် နာတဲ့ခါးကိုတောင့်ခံပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတာပဲ မရဘူး… ၁နာရီလောက်ကျတော့ သန္တာအရမ်းပင်ပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ်… ကျွန်မတို့ကတော့ ကျွဲရိုင်းအစွမ်းနဲ့ မအိပ်ကြဘူး… မောင်မောင်က ညလယ်လောက်ကျရင် တရုတ်တန်းက ဆန်ပြုတ်ဆိုင်ကို သူလိုက်ပို့ပေးချင်တယ်ပြောထားတော့ အစကတော့ ခါးအခြေအနေမကောင်းတော့ မသွားတော့ပါဘူးဆုံးဖြတ်ထားတာ… သူက လိုက်ပို့ပေးချင်ပုံရတာရော… ကျွန်မခါးလဲ နည်းနည်းလေး သက်သာသလိုရှိတာနဲ့ ည၃နာရီလောက်မှာ ထွက်စားဖြစ်တယ်... မဗေဒါလဲ မိန်းကလေးသာဖြစ်တာ အဲလို ညဘက် Supper ထွက်စားရတာပျော်တယ်… လမ်းတွေမှာ လူရှင်းနေတယ်… ညဘက်လေကလဲ အရမ်းအေး… ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းအဲဒိနေ့က အရမ်းချမ်းနေတယ်… အစ်မနဲ့ မောင်မောင်ကတော့ သိပ်မချမ်းကြဘူး… ဘာလို့မှန်းမသိ… တရုတ်တန်းရောက်တော့ လူတွေပြန်တွေ့တယ်… နိုက်ကလပ်တွေလဲ အဲ့မှာရှိတယ်လေ… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ကတော့ SuperBowl ဆိုတဲ့ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်ကို ဦးတည်လိုက်တယ်….
SuperBowl Chinese Restaurant - Congee in Sydney Chinatown
ဆိုင်ပုံစံကတော့ မြန်မာပြည် ရွှေတောင်တန်းလမ်းက ကြေးအိုးဆိုင်လိုပုံမျိုးပါပဲ… လူတွေလဲ အထဲမှာတော်တော်များတယ်… ကလပ်ကအပြန် ၀င်စားနေကြတာတွေလဲရှိမယ်… အုပ်စုလိုက်တွေ… Service ကတော့ တော်တော်လေးစောင့်ရတယ်… လူခေါ်တာတောင် တော်တော်ခေါ်ရတယ်… ပြောရရင်တော့ Service ကလဲ မြန်မာပြည်က ကြေးအိုးဆိုင်တွေလောက်ပါပဲ… သူငယ်ချင်းက ဆန်ပြုတ်ရယ်၊ ကမာကို ခရုဆီနဲ့ချက်တာရယ်၊ အီကြာကွေးရယ်၊ ကန်စွန်းရွက်ကြော်ရယ် မှာလိုက်တယ်… ဆန်ပြုတ်ပွဲကြီးက ရောက်ချလာတော့ SuperBowl မပြောရဘူး အကြီးကြီးပဲ… ကျွန်မက ပုံမှန်ဆို ဆန်ပြုတ်ရော ကမာရော ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး… ဒါပေမဲ့ အများကြီးမို့ စားကြည့်မယ်ဆိုပြီး စားကြည့်တော့ စားကောင်းတယ်… ဆန်ပြုတ်က အီကြာကွေးလေးနဲ့စားတာ ကောင်းမှကောင်း… ကမာဟင်းကလဲ ခရုဆီရယ် ကြက်သွန်မိတ်နံ့မွှေးမွှေးရယ်နဲ့ လုံးဝမညှီဘူး… စားကြည့်ပြီး သဘောကျသွားတယ်.. ကန်စွန်းရွက်ကြော်ကတော့ ရှင်းပြစ်နိုင်ပါတယ်… အသာလေးပါ… ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံး ဆန်ပြုတ်မကုန်တော့ အထုတ်နဲ့ထုတ်လာခဲ့တယ်… မနက်ကျ စားလို့ရတယ်လေ… ဟိုတယ်ခန်းမှာက ပန်းကန်ခွက်ရောက်တွေရော ဘေဇင်ရော မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ရောရှိတယ်ဆိုတော့ အတော်ပဲ… ဆစ်ဒနီရောက်လို့ တရုတ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းစားချင်ရင် 8 Quay St, Sydney NSW 2000, Australia က SuperBowl မှာ သွားစားနော်… :D …
ဆစ်ဒနီ တရုတ်တန်းက နိုက်ကလပ်တွေ... ရုတ်ရုတ်လုပ်ရင် ရဲကားအဆင်သင့်...
ကမာဟင်းတွေ စားဖူးသမျှထဲမှာ ဒီဟာကို အကြိုက်ဆုံး
ကျွန်မတို့ လေယာဉ်က နေ့လည် ၁ နာရီလောက်ဆိုတော့ ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပြီး ခဏအိပ်လို့ရသေးတယ်… မနက် ၈နာရီလောက်မှာ သန္တာက ပြင်ဆင်ပြီး ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်တော့ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ “အေး..အေး… ကျေးဇူးပဲ သူငယ်ချင်းရေ…” လို့ပြောဖြစ်တယ်… ကျွန်မအကျင့်တစ်ခုက ခွဲခွာချိန်မှာ ဘယ်တော့မှ Properly နှုတ်မဆက်ရဲဘူး… မသိစိတ်ထဲမှာ နောက်ပြန်မတွေ့မဲ့လူတွေမှ မဟုတ်တာဆိုတာကိုပဲ ဇွတ်ယုံကြည့်ထားချင်တယ်… အဲလိုဖြစ်နေတာ တစ်ခုကောင်းသလို တစ်ခုမကောင်းဘူး… အသေအချာကြီး နှုတ်မဆက်တဲ့အတွက် နှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာ Drama တွေဖြစ်ပြီး စိတ်မကောင်းမဖြစ်ရဘူး… စိတ်ထဲမှာလဲ နောက်ပြန်တွေ့အုံးမှာပါလို့ အားတင်းထားတယ်… ဒါပေမဲ့ ခွဲခွာလာပြီး ကြာလာရင် “အော်… ငါ သူ့ကိုတောင်သေသေချာချာ နှုတ်မဆက်ဖြစ်ခဲ့မိဘူး” ဆိုပြီး ဒွိဟနဲ့ စိတ်ထဲ ခုလုခုလု ဖြစ်ရပြန်ရော… မောင်မောင်ကတော့ ကုတင်ပေါ် အိပ်ကောင်းနေတာ ဘာမှ မသိဘူး… ကျွန်မကတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ် စောင်တွေ အထပ်ထပ်ခင်းပြီးအိပ်တာ… နောက် ၁၀နာရီလောက်ကျတော့ ကျွန်မတို့ညီအစ်မလဲ လေဆိပ်ဆင်းဖို့ ပြင်ဆင်တော့တာပေါ့… မနေ့ညက သိမ်းထားပင်မဲ့ ကျန်နေသေးတဲ့ လက်ကျန်တွေသိမ်း ရေမိုးချိုး ပြင်ဆင်နေတုန်းမှ မောင်မောင်တစ်ယောက်နိုးလာတယ်… သူလဲ မျက်နှာသစ်ပြီး ညက ဆန်ပြုတ်ကို နွေးပြီး မနက်စာတိုက်လိုက်တယ်…
We Miss our Childhood Classmate and the Memories being with them
ကျွန်မတို့လဲ မနက်စာလား နေ့လည်စာလားတော့ မသိဘူး… Subway စားချင်စိတ်ထပ်ပေါက်လာတာနဲ့ မြို့ထဲဘက် မောင်မောင်နဲ့တူတူ လမ်းလျှောက်လာတယ်… သူကတော့ အားနာလို့ ကျွန်မတို့ကို Subway ကူရှာပေးမယ်ပြောပေမဲ့ သူလဲ ပင်ပန်းနေပြီ ပြန်ချင်မှာပေါ့ဆိုတာ သဘောပေါက်တာနဲ့ ရတယ် ပြန်တော့လို့ပဲ ပြောပြီး လမ်းခွဲလိုက်တယ်… ပုံမှန် Bye Bye လောက်ပါပဲ… ၂ခေါက်တောင် ပြန်လှည့်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး… သူ ၈တန်းတုန်းက ILBC တက်ဖို့ ကျောင်းထွက်သွားတုန်းကဆိုလဲ ဘာမှ နှုတ်မဆက်ဖြစ်ခဲ့ပဲလေ… ကျွန်မအစ်မက အဲဒိနားတ၀ှိက်မှာ Subway ဆိုင် သူတွေ့မိသလိုပဲပြောတယ် ဒါပေမဲ့ရှာမတွေ့… နောက်မှ မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ ကျွန်မကြည့်တော့တွေ့သွားတယ်… Subway ရှိတဲ့ လမ်းသွယ်ထဲမှာ ကိုရီးယားတွေဘာပွဲတော်လုပ်နေလဲတော့ မသိဘူး… အကြီးအကျယ်ပဲ သူတို့ ရိုးရာဝတ်စုံတွေနဲ့ လမ်းကို ပိတ်ပြီး စင်ပါဆောက်ထားသေးတယ်… သြစီမှာလဲ ကိုရီးယားတွေတော်တော်များတယ်…
Departure ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှ မိုးတွေသည်းလို့.... တိမ်တွေပါ ပြိုကျလိုက်ပါလား...
ညီအစ်မ ၂ယောက် အလာတုန်းက လေဆိပ်မှာဝယ်လာတဲ့ Airport Transfer ကားလွတ်မှာစိုးလို့ Subway ကို ထုတ်လာပြီးတော့ ဟိုတယ် လော်ဘီမှာပဲ အခန်းပြန်အပ်ပြီး ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်… ပြန်ရတော့မှာမို့ စိတ်မကောင်းနေတဲ့သူကို မိုးတွေက သည်းကြီးမဲကြီးရွာပြီး နှုတ်ဆက်နေတယ်… ကားလာခေါ်လို့တောင် မိုးတွေသဲပုံနဲ့ အထုတ်တွေဘယ်လိုသယ်ရပါ့… ခါးကလဲ လုံးလုံးကောင်းသေးတာမဟုတ်… နောက်တော့ လာခေါ်ချိန်ထိ ဘယ်သူမှ မလာတာနဲ့ ဟိုတယ်အ၀မှာ ရပ်စောင့်နေဖြစ်တယ်… အဲ့ဒိနားမှာ တောင်းအိတ်စ်လိုကားမျိုးရပ်ထားတာတော့ အတော်လေးကြာနေပြီ ဒါပေမဲ့ သူရောက်ရင် ကိုယ့်ကိုလာခေါ်မှာပဲလေဆိုပြီး ကိုယ်ကလဲသူ့ကိုပြန်စောင့် သူကလဲကိုယ့်ကိုစောင့်ဖြစ်နေတယ်… နောက်မှ မိုးရေထဲပြေးပြီး အဲ့ကားမှာသွားမေးတော့မှ ဟုတ်တယ် ကျွန်မတို့စီးရမဲ့ကား… ကားသမားက ကျွန်မတို့အိတ်တွေကို ကူသယ်ပေးရှာပါတယ်… ဒီလိုနဲ့ မိုးသည်းကြီးထဲမှာ ဆစ်ဒနီမြို့နဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ Memory တွေကိုပဲ သယ်ယူရင်း လေဆိပ်ကို တစ်ဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်… လေဆိပ်သို့ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို မိုးရေတွေကြားမှာတွေ့ရတော့ ဘယ်အရာမဆို အဆုံးတော့ရှိစမြဲပဲ… ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆုံးသတ်မှာပဲ လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နားချရင်း နောက်နေ့ပြန်တက်ရမဲ့ အလုပ်ခေါင်းထဲရောက်တော့မလိုဖြစ်တုန်း… ခေါင်းကို ခါယမ်းလိုက်ပြီး… အလုပ်အကြောင်း ၅မိနစ်ကြိုစဉ်းစားရင် ၅မိနစ် ဆစ်ဒနီမှာ လျော့ခံစားရတာနဲ့တူတူပဲ… ရသမျှ အချိန်အပြည့်အ၀ခံစားမယ်… Gold Coast ကတည်းက မကုန်နိုင်တဲ့ ဖုန်းကဒ်ကိုလဲ အသေသုံး… ဓာတ်ပုံတွေ upload လုပ် ချက်အင်ဝင် အတော်လေးကို အသုံးခံတယ်… လေဆိပ်မှာ ချက်အင်ဝင်တော့ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မက လက်မှတ်ကို တူတူဝယ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် တူတူချိန်လို့မရပါဘူးတဲ့… ဒီတော့ ကျွန်မအိပ်ကပေါ့ပြီး ကျွန်မအစ်မအိတ်က Hand Carry ကို ထည့်ချိန်လို့မရတော့ဘူး… ၂ယောက်လုံးပေါင်း ၃အိပ်က ကီလိုလောက်တယ်… ကျွန်မအိတ်နဲ့ သူ့ Hand Carry ပေါင်းလဲကျော်တယ်… သိတယ်ဟုတ် ကို့လို့ကန့်လန့်… ကျွန်မအစ်မအိတ်ကို Check in ၀င်ပြီး ကျွန်မ ကင်မရာအိတ် သူ့သယ်ခိုင်းမလို့… ကျွန်မက ခါးနားနေလို့… ခုတော့ ၂ယောက်လုံး ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးစီသည်ရတော့တာပေါ့ (ကျွန်မကင်မရာအိတ်ကလဲ ကျောပိုးအိတ်ပဲ)… လေဆိပ်က ဆိုင်တွေမှာကျတော့ Nougat တွေ ဆိုင်တိုင်းလိုလိုရှိတယ်… စကာင်္ပူမှာတော့ Nougat က သြစီပြန်လက်ဆောင်ပဲ… ဒါနဲ့ ကျွန်မက Mix Flavor 1KG ထုတ် ၂ထုတ်နဲ့ Nougat Pistachio အကြီး ၂ချောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်… အိမ်မှာစားဖို့နဲ့ အလုပ်က လူတွေဘုံစားဖို့…
Scoot လေယာဉ် ရိတ်ပုံကတော့ ကျွန်မတို့ညီအစ်မ ချက်ကင်ဒီလောက်အရင်ဆုံးဝင်တာတောင် ထိုင်ခုံတူတူမရဘူး… ပိုက်ဆံပေးပြီး ကြိုရွေးစေချင်လို့ထင်ပါတယ်… မရလဲဘာအရေးလဲ အိမ်မှာတစ်ချိန်လုံးတွေ့နေရတဲ့ ဒီမျက်နှာ… လေယာဉ်လေး ၇နာရီလောက်လေးကြာတာကို… နေရာမတူတဲ့အပြင် Cabin တောင်မတူဘူး… တော်ပါသေးတယ်…ကျွန်မဘေးကျတဲ့သူက အရမ်းအဆင့်မရှိတဲ့သူမဟုတ်လို့… သူ့ဟာသူအေးဆေးပဲ… အဆင့်မရှိတာတွေက ဟိုဘက် ဘေးတန်းက ကျွန်မနဲ့ မျက်စောင်းထိုး လူသွားလမ်းခြားက ပြည်ကြီးမိသားစု… အားအားယားယား ကမြင်းကြောဆွဲတဲ့ ကလေးတွေမွေးထားတိုင်း ကောင်းကောင်မထိန်းဘူး… လေယာဉ်ပေါ်လာပြီး စိန်ပြေးတန်းဆော့နေတယ်… လူက ခွဲခွာလာရလို့ စိတ်ကတို… ပုံမှန်ဘ၀ကြီးပြန်စရတော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကလေး… လေယာဉ်ပေါ်မို့ နေရထိုင်ရမကောင်းလို့ ခေါင်းလေးအသာချပြီး ထုံးစံအတိုင်း အိပ်နေတာ… မသာလေးတွေ ဘေးမှာ လာအော်လိုက်… လက်ကို တိုက်သွားလိုက်… ကလေးတွေဆော့တာကို သိပ်အပြစ်မပြောချင်ပါဘူး… သူတို့မွေးထားတဲ့ကလေးတွေကို တာဝန်ယူမှုမရှိပဲ ကောင်းကောင်းမထိန်းတဲ့ လူကြီးတွေကိုပဲ အပြစ်ပြောချင်တာ… မဗေဒါ ကလေးတွေနဲ့ အရောတ၀င်မနေတတ်ပေမဲ့ သူတို့ကို မမုန်းပါဘူး… ဒါပေမဲ့ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ စကားနားမထောင် လူကြီးကို မထင်မဲ့မြင်လုပ်တဲ့ကလေးတွေတော့ တစက်မှကြည့်မရဘူး… အဲဒါက ကျွန်မ Cabin ကပြဿနာ… ကျွန်မ အစ်မ Cabin မှာတော့ စလုံးတရုတ်နဲ့ စလုံးကုလား အော်ကြီးဟစ်ကျယ် နောင်ကြိမ်ပလေးကြတယ်ဆိုပဲ… ဘယ့်နှယ့်လေယာဉ်စီးတိုင်းကောင်းတယ်မထင်နဲ့… ၂၆ လမ်းဈေးထဲထိုင်နေရသလိုပဲ…. အလာတုန်းက Scoot Biz တန်းမှာလဲ ယခုလောက်မဆိုးပေမဲ့ စိတ်တိုင်းမကျခဲ့ရ… အပြန် ရိုးရိုးတန်းဆိုတော့လဲ ဘာကိုမျှော်လင့်နေသေးသလဲ… နောက်ဘယ်တော့မှ ဈေးဘယ်လောက်ချိုချို Scoot မစီးတော့ ပြီဟုသာ ကြုံးဝါးလိုက်ရင်း….. ကျွန်မတို့ကို လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုနေသော အစစအရာရာ အင်မီဂရေးရှင်းဖြတ်ရာမှာ ခေါင်းမော့ရင်ကော့ဖြတ်လို့ရတဲ့ စစ်စတန်ကိုသုံးပေးထားတဲ့ စကာင်္ပူရွှေမြို့တော်ကြီးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါတော့တယ်…
စကာင်္ပူမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏... သင့်ဘ၀အမှန်ကို ပြန်လာလှည့်တော့....
(စာကြွင်း… မြန်မာပြည်ပြန်တိုင်း ကိုယ့်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ အင်မီဂရေးရှင်းမှာ လဘက်ရည်ဖိုးတောင်းတာနဲ့ ကိုယ်မှန်နေရက်နဲ့ ဘာများရစ်ခံရအုံးမလဲကြောက်ရတာနဲ့… အဲဒိခံစားချက်နဲ့… ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုက သူတို့ဆီမှာ ကြာရှည်နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေသူကို လှိုက်လှဲစွာ ဘာမှ ပြဿနာမရှိ နှောင့်နှေးမှုမရှိ စက်လေးမှာ ပတ်စပိုစ့်လေးတင် လက်မလေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပွင့်သွားတဲ့တံခါး စစ်စတန်လေးကြောင့် စကာင်္ပူကိုပြန်လာတိုင်း Holidays are over ဆိုပေမဲ့ စိတ်ကြည်နူးရပါတယ်)
နောက်ဆုံးနေ့အကြောင်းလေးကို Vlog လုပ်ထားပါတယ်... ကြည့်ရှူအားပေးကြပါအုံးနော်... :D
Posted by mabaydar at 10:03 AM9comments :
Running Man Ep 133 မှာ Bungee Jump လုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းသား Lee Dong Wook
Running Man Ep 133 ကို ကြည့်ပြီးကြသူတွေလဲ ကြည့်ပြီးလောက်ပါပြီ... နောက်ကျနေမှန်းသိပေမဲ့ ဟိုနေ့ကမှ အဲဒိ အပိုင်းကိုကြည့်ဖြစ်ပြီး မင်းသား Lee Dong Wook ကို ပိုပြီး သဘောကျသွားလို့ ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒိ အပိုင်းမှာ Running Man ဟာ Macau နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမြင့်ဆုံး တာဝါပေါ်ကနေ Bungee Jump လုပ်ဖို့ Mission တစ်ခုပါလာပါတယ်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာ ၃ယောက်ရှိပြီး ၁ယောက်ခုန်ချရင် လုံလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Bungee Jump ကို လုပ်ဖို့ အားလုံးက တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ကြပြီး ဘယ်သူမှ မလုပ်ရဲပါဘူး... မင်းသား Lee Dong Wook က Running man ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဧည့်သည်အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လဲ ကနဦးမှာ ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါတယ်။
Macau Tower ကို မသွားခင် Bungee Jump ဟာ ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းကြောင်း Running Man members တွေကို သူပြောပြနေတာ အတော်လေး ချစ်စရာကောင်းပြီး ရီရပါတယ်... အောက်က ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပါ... အဲဒိအချိန်တုန်းကတော့ သူကိုယ်တိုင် ခုန်ရမယ်လို့ ဘယ်ထင်ခဲ့မလဲနော်...
အစီအစဉ်ခေါင်းဆောင် "Yoon Jae Suk" က "မင်းက မင်းသားပဲ မင်းခုန်ချသင့်တယ်" လို့သူ့ကိုပြောတော့ မျက်ကလူးဆန်ပြာ "ငါလဲ ဖျော်ဖြေရေးသမားပါပဲ... ဘာလို့ခုန်ရမှာလဲ" ဆိုပြီး ပြန်ပြောတာတွေ့တော့ ကျွန်မသဘောကျမိပါတယ်။ အော်... ရုပ်ရှင်ထဲမှာသာ မင်းသားတွေ Cool တာ အပြင်မှာသူတို့လဲ ကြောက်တတ်မှာပေါ့ဆိုပြီး တွေးမိလို့ သဘောကျတာပါ။
ဒါပေမဲ့ အဆုံးမှာ သူတို့အဖွဲ့ ၃ယောက်မှာ Song Ji Hyo မိန်းကလေးကို ခုန်ခိုင်းရင် ယောကျာင်္းတစ်ယောက်အနေနဲ့ မကောင်းတာနဲ့ သူပဲ ခုန်ချမယ်ဆိုပြီး ယောကျာင်္းပီသစွာ အနစ်နာခံတာတွေ့ရတော့ သူ့ကို အရင်ကထက် ပိုပိုပြီး သဘောကျသွားပါတယ်။
သူခုန်ချခါနီးမှာ ကြောက်လို့ အကြိမ်ကြိမ်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးမှ တတိယတစ်ကြိမ် မကြိုးစားခင် အသက်ကို ၀၀ရှု သူ့စိတ်ကို ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီး အောင်မြင်စွာခုန်ချရင်း သူတို့ အဖွဲ့ Mission ကို ကူညီခဲ့ပါတယ်...
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Korea မင်းသား Lee Dong Wook အတွက် ဂုဏ်ယူသလို၊ ငါ့ကိုရီးယားမင်းသားတွေ မိန်းကလေးတွေထက် နုဖတ်ပြီး ချောရင်ချောနေမယ်။ ယောကျာင်္းပီပီသသ အနစ်နာခံတတ်ကြပါတယ်ဆိုပြီး ကြံဖန် ချီးမွှမ်းမိတော့တာပါပဲ...
အဲဒိ Running man episode 133 ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး မင်းသား Lee Dong Wook ရဲ့ Me2world account မှာ ရိုက်ကွင်းထဲမှာ သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို တင်ပြီး ယခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်...
" “The 'Running Man' cast are very kind. I had lots of fun. Thank you. The Legend of the Golden Sword will air in two weeks. Please stay tuned. Who do you think will win?”
"Running Man မှာ ပါတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေဟာ အရမ်းသဘောကောင်းကြပါတယ်။ အရမ်းလဲ ပျော်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သမိုင်းဝင်ရွှေဓားအကြောင်းကို နောက် ၂ပတ်နေရင် လွှင့်ပါမယ်။ ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါ" လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်...
ပုံထဲမှာတော့ အားလုံးဟာ ဗီယက်နမ်ရိုးရာဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး ရိုက်ကွင်းမစခင် အနားယူနေကြပါတယ်။ Running Man Episode 133 မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်လိုက်အုံးနော်...
Posted by mabaydar at 1:57 PM4comments :
Labels: Celebrities , Humour
Movie Name: Percy Jackson: Sea of Monsters
Alexandra Daddario as Annabeth Chase, the demigod daughter of Athena and Percy's love interest.
Douglas Smith as Tyson, Percy's cyclops half-brother.
Half Blood (လူနဲ့ God တွေနဲ့ အကြောင်းပါလို့ရလာတဲ့ကလေး) တွေနေတဲ့ ရွာလေးမှာ တန်ခိုးအကြီးဆုံးနတ်ဘုရား ၃ပါးထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရေနတ်ဘုရားနဲ့ လူနဲ့ရထားတဲ့ သား Percy Jackson လဲနေထိုင်တယ်။ အဲဒိရွာလေးကို သူ့နဲ့ အဖေတူ အမေကွဲ ညီအစ်ကိုတော်တဲ့ မျက်လုံးတစ်လုံးတည်း လူ့ဘီလူးအမျိုးအစား (Cyclops) တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ သူတို့ရွာကို အုပ်မိုးထားတဲ့ အကာအကွယ်ပျက်စီးပြီး Luke ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်။ Luke က တစ်ချိန်မှာ Olympus တောင်ကို ဖြတ်စီးပြီး ရှေးယခင်က အရမ်းဆိုးခဲ့တဲ့ မိစ္ဆာကိုလဲ ပြန်အသက်သွင်းမယ်လို့ ချိန်းခြောက်ခဲ့တယ်။ Luke ဟာ သူတို့ရွာကို အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ Zeus နတ်ဘုရားရဲ့ ဆုံးပါးသွားတဲ့ သမီးတော် Thilia ရဲ့ ရုပ်ကြွင်းကနေ ပေါက်နေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို အဆိပ်ခတ်ဖျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက် ထိုသစ်ပင်ကို ပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့ သေတဲ့ဘယ်အရာကိုမဆို ပြန်လည်ရှင်သန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ရွှေကော်ဇောကို မိစ္တာပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီး သွားယူဖို့လိုအပ်လာတယ်။ ရွာသူကြီးက Percy ရဲ့ ပြိုင်ဘက် Ares နတ်ဘုရားရဲ့ သမီး Clarisse ကို အဲဒိ ကိစ္စတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။ သို့သော် Percy နှင့် သူ့သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ရယ်၊ သူ့ရဲ့ Cyclops အစ်ကိုရယ် ဟာလဲ သူတို့ဘာသာသူတို့ အဲဒိ ရွှေကော်ဇောကိုယူဖို့ တိတ်တိတ်လေး ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ထိုသို့ မထွက်ခင်မှာပဲ Percy ကြားသိခဲ့ရတဲ့ ရှေ့ဖြစ် ဟောစတမ်းအရ တန်ခိုးကြီးနတ်ဘုရား ၃ပါးရဲ့ Half-blood ကလေးထဲက တစ်ယောက်ယောက်ဟာ Olympus တောင်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ ဖျက်စီးနိုင်သည်ဖြစ်စေ တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟု ဟောပြောခဲ့တယ်။ လတ်တလော မှာ Percy တစ်ယောက်တည်းသာလျှင် ရေနတ်ဘုရားရဲ့ Half-blood သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ ဟောစတမ်းသည် သူ့ကို ရည်ညွန်းသည်ဟု မှတ်ယူခဲ့တယ်။ (စာကြွင်း Percy အစ်ကို Cyclops ဟာ ရေနတ်ဘုရားရဲ့ သားဆိုပေမဲ့ လူနဲ့မပေါင်းတဲ့အတွက် Half-blood မဟုတ်... Zeus နတ်ဘုရားရဲ့ သမီးတော် Thilia ဟာလဲ သေဆုံးပြီး အပင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲ သူလဲ မဟုတ်နိုင်ချေ)...
ဟောစတမ်းအတိုင်း Percy ဟာ Olympus တောင်ကို ကယ်ဆယ်မလား၊ ဖျက်ဆီးမလား။ ဒါမှမဟုတ် ဟောစတမ်းဟာ Percy ကို ရည်ညွန်းတာ သေချာလား။ ရွှေကော်ဇောကိုသွားယူတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေ၊ ဘယ်လို မိစ္ဆာမျိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမလာဆိုတာကို ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြည့်ရှုကြပါနော်....
Percy Jackson: The lightening thief ကို ကြိုက်ရင် ဒီဇာတ်လမ်းကိုလဲ ကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထမကား Lightening thief က နည်းနည်းလေးသာတာက သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ နတ်ဘုရားသားမှန်းမသိခဲ့တော့ ကြည့်ရတာ ပိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်။ ကျွန်မ Sea of Monsters ကို သွားကြည့်တုန်းက ပထမကား Lightening Thief ကို မကြည့်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်လို့နားလည်ပါတယ်။ သိပ်စပ်ဆက်မှု မရှိပါဘူး။ ဒီကားကို အထူးသဖြင့် ကြိုက်တာကတော့ Graphic တွေအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေါ့နော် ဒီလို စိတ်ကူးယဉ်ကားမျိုးကာ Graphic ဦးစားပေးကားတွေကိုးးးး။ ကြည့်နေတဲ့တစ်လျှောက်စိတ်ဝင်စားမှု ပေးပါတယ်။ လူတွေခေါ်တဲ့ ဘာမြူတာ ထရိုင်ဂယ်ဆိုတာ ဒီကားထဲမှာ တကယ်တော့ အရမ်းကြီးတဲ့ မိစ္ဆာတိရိစ္ဆာန်ကြီး တစ်ကောင်နေတဲ့နေရာပေါ့.. လာသမျှလူကို သူ့ဝမ်းထဲထည့်စားပြစ်လိုက်တယ်တဲ့။ မင်းသားတို့ အသက်ကယ်လှေလေးကို အဲဒိ အကောင်ကြီး မြိုတုန်းက ပြတဲ့ပြကွက်တွေကို ကြည့်နေတုန်းက နောက်ပိုင်း Universal Studio မှာတောင် အဲဒိ Ride ထည့်သင့်ပြီလို့ တွေးမိတယ်။
နောက်ပြီး အကောင်ကြီးတွေကို ဒီဇိုင်းလုပ်ရာမှာလဲ သူတို့ရဲ့ တီထွင်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းကို အားကျတယ်။ (မဆီမဆိုင် မဗေဒါ ကျောင်းက ပရောဂျက်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အကောင်တစ်ကောင်ဖန်တီးပါဆိုတာ အတော်ဦးနှောက်စားခဲ့ရတယ်)... သူတို့ လူဆိုးသဘောင်္နောက်ကို လိုက်တဲ့အခန်းမှာဆို ရေထဲက မြင်းနဲ့ ငါးနဲ့ စပ်ထားတဲ့ အကောင် ဒီဇိုင်းကို ကြည့်ပြီး ငါတစ်ခါမှ မစဉ်းစားမိပါလား။ ဒီဇိုင်းနာရဲ့ စိတ်ကူးကို မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်ခဲ့ဘူး။ မြင်းနဲ့ငါးနဲ့ကို စပ်ထားတာများ အားလုံးက သူ့ဟာနဲ့သူ အလိုက်သင့်ပဲ။ မြင်ခေါင်းဆက်တဲ့နေရာမှာ ပါးဟပ်တွေဘာတွေနဲ့ တကယ်တော်တယ်။ မြန်မာကားတွေ သူများဆီက အိုင်ဒီယာကို ပိုစတာကအစ တိုက်ရိုက်မခိုးချပဲ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် လူတွေစိတ်ထဲမှာ ဟာကနဲ ဟင်ကနဲဖြစ်အောင် မလုပ်တတ်ကြဘူးလားမသိဘူး။ မြန်မာကားတွေနဲ့ ယှဉ်စဉ်းစားလေ၊ နိုင်ငံခြားကားတွေရဲ့ အသေးစိတ် ဖန်တီးမှုကို ပိုပြီး မြင်သာလေပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ နိုင်ငံခြားကားမှာတောင် အချောင်ခိုပြီး Budget ကပ်စီးပြီး ရိုက်တဲ့ ကားတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် ကွားခြားမှုကို သိနိုင်တယ်။
ဘာပဲပြောပြော ခုလို စိတ်ကူးယဉ် Adventure ကားတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ Percy Jackson: The Sea of Monsters ကားလေးက ကျေနပ်မှုပေးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက်လဲ ပျင်းစရာမကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Posted by mabaydar at 10:31 PM 8 comments :